Denmark oo dhiseysa Guryo dhalinyarada u gaar ah oo si fudud lagu helayo
HomeWararka DenmarkDenmark oo dhiseysa Guryo dhalinyarada u gaar ah oo si fudud lagu helayo
1 month ago Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Marka la gaaro sanadka 2031, hadafku Dowlada Denmark ayaa ah in caasimada laga dhiso 12,000 kun oo guryo dhalinyaro ah, 4,500 oo ka mid ahna waxay noqon doonaan guryo dhalinyaro oo gaar loo leeyahay. Laakiin maanta ma jiraan wax damaanad ah in ardayda iyo dhallinyarada ay heli karaan guryo si gaar ah loo dhisay..
Sidaas awgeed, Maayarka Caasimada Copenhegan, Lars Weiss (S) ayaa raba in wax laga beddelo sharciga, kaasoo hubinaya in guryaha loo qoondeeyay ardayda.
– Waxaan aragnay tusaalooyin qaar halka heerka kirada guriga ay tahay 10,000 karoon bishii qiyaastii 30 mitir oo laba jibbaaran. Mana jiro arday fursad u haysta nin Shiineys ah inuu ku bixiyo intaas, ayuu yidhi.
Dowlada Denmark ayaa guryaha u kireysa qaab caadi ah mana jirto guryo si gooni ah loogu tala galay ardayda iyo dhalinyarada.